"ကြယ်တွေဆုံတဲ့ည....." | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီ post..လေးကိုတင်ရတာ ဒီနေ့ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းတွေကြောင့်ပါ...!သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေ အတွက် ဝမ်းသာလွလွန်းလို့ မျက်ရည်လေးတွေ လှည်ခဲ့မိတယ်ဗျာ....!မုသားမပါဘဲပြေားတာပါ တကယ်စိတ်ထဲကအရှိတိုင်းကို ကျွန်တော်ပြေားတာပါ...!တကယ်ပဲ ကြယ်တွေဆုံတဲ့ ညလေးပါလို့ ပြေားလိုက်ပါရစေ...!သတင်း ဓါတ်ပုံတွေ ကိုကြည့်ပြီး အရမ်းပီတိတွေဖြာ နေမိတယ်ဗျာ...!
တကယ့်ကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် မဟုတ်ပဲ အများအကျိုးအတွက် လုပ်တဲ့ သူတွေဆိုရင် ဘုရားကကြည့်မနေပါဘူး...!အားလုံးတော့ လုပ်မြှောက်လာမှာပါ...!အားလုံး ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်ပြီးကြိုးစားတဲ့ သူတွေ အရမ်းလိုပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်...!
အမိမြေ ကိုလည်း အရမ်းကိုတိုးတက်စေချင်ပြီဗျာ...!
No Response to ""ကြယ်တွေဆုံတဲ့ည.....""